Hiran State - News: HS:-Wararkii ugu danbeeyey ee naga soo gaaraya Bulo Burde iyo nawaaxigeed iyo dhaqdhaqaaqa Shabaab.
HS:-Wararkii ugu danbeeyey ee naga soo gaaraya Bulo Burde iyo nawaaxigeed iyo dhaqdhaqaaqa Shabaab.
HS:-Wararkii ugu danbeeyey ee naga soo gaaraya Bulo Burde iyo nawaaxigeed iyo dhaqdhaqaaqa Shabaab ay halkasi ka wadaan.
Kooxda mayalka adag ee Shabaab ayaa dhaqdhaqaq xoogan ka wada magaalada Bulo Burde iyo nawaaxigeeda iyagoo halkaas ku sugaya ciidamo ka imaanaya degmada Ceelbuur. saakey subaxii hore ayey shacabka iskaka dhigeen iney ka baxayaan magaalada Bulo Burde laakinse arintaasi ma ahan mid sax ah waxeyna iyagoo is ticmaalaya qaar ka mid ah idaacadaha Mogdisho sheegeen iney ka baxayaan magaalada si uu uga yaraado culeysyada iyo dagaalada ku soo wajahan magaalada Bulo Burde mana ciidamo Shabaab ah oo ka baxay Bulo Burde si fiican ayey u joogaan magaalada waliba sarasakiil ajnabi ah aya dagaalka hogaamineyso.
Markaad eegto dhaqdhaqaqooda waa labo nooc.
1- Waxey ku sugayaan halkaas ciidamo kaka sugan degamda Ceelbuur.
2- Sidii ay u kasban lahaayeen shacabka si aysan ugu dhicin waxii ka qabsaday magaalada Belet Weyne oo ay shacabku ciiidamadii soo galay kala hor tageen wax kasta oo ay heli karen caano, biyo, cunto iyo waxii la mid ah taasi oo dhabar jab ku noqotay Argagixisada.
Hadaba shacabka Bulo Burde ayaa u muuqda ineyba ka daran yahiin kuwa Belet Weyne waayo magaalada ayey intooda badan Shabaab uga baxeen markii ay hada ciidamada soo dhoobeen saacadahii ugu danbeeyey.
Laakinse marka xaalada dhinaca kale laga eego jidka isku xira Ceelbuur iyo Bulo Burde waa xiran yahay waxaana ku sugan ciidamada xoogaga Hiiraan oo soo buux dhaafiyey saacadahii ugu danbeyey iyagoo garab iyo gaashaan ka helaya dhaliyaro dagaal yahaniin ah oo deegaaanka ka soo jeeda.
Wararka naga soo gaaraya dhinacaas iyo Belet Weyne xoogaga reer Hiiraan ayaa saacadahii ugu danbeeyey loo qeybiyey risaastii ugu badneyd ebed si ay u difacaan magaalada Belet Weyne oo ah magaalo istiraatuuji ah, waana nabad magaalada ciidamada xoogoodane magaalada dibada ayey ka joogaan dhawr meelood ayeyna ka degan yahiin iyaga iyo hubkooda, magaaladuna waa nabad.
· admin on January 03 2012 13:15:42 · 0 Comments · 1656 Reads ·
14,589,601 unique visits